Ku xayeysii Martech Zone | Martech Zone
Dhamaan beeraha ayaa loo baahan yahay!
Abuur Xayeysiis cusub
Xagee rabtaa inaad ku tusto Xayeysiiskaaga?
Featured on Desktop (1200px ballaaran by 280px dheer)Featured on Mobile (336px ballaaran oo 280px dheer)Featured on Loox (768px ballaaran oo 280px dheer)
Cinwaanka Xayeysiiska (40)
Sharraxaadda xayeysiiska (80)
Barta tallaabada (20)
URL Xayeysiis ah (255)
Markaad rabto inaad bilowdo soo bandhigida xayeysiiska?
Xullo Moodeel Qaansheegad iyo Xaddidaadda xaddidan
Gaaritaan bille ah oo ka badan 50,000 milkiileyaal ganacsi, go'aan qaadayaal, xirfadlayaal suuqgeyn, iyo xirfadlayaal iib ah.
77.3% ee martidayadu waxay ka yimaadaan natiijooyinka mashiinka raadinta.
Waxaa lagu tarjumay (mashiin) in kabadan 100 luqadood iyadoo 70% Ingiriisi ah.
Maalin kasta iyo Usbuucii 30,000 ayaa ku hawlan macaamiisha emailka.
Isku darka warbaahinta bulshada ee soo socota ayaa leh in ka badan 50,000 oo raacsan.
Martidayadu waxay baarayaan, ogaanayaan, oo baranayaan iibkooda soo socda iyo tikniyoolajiyadda suuq geynta iyo xeeladaha la xiriira. Falanqaynta waxay kuxirantahay sida danaha sare:
Adeegyada Xayeysiinta & Suuqgeynta
Ganacsiga & Waxsoosaarka Software
Naqshadeynta Webka & Horumarinta
Adeegyada SEO & SEM
Goobaha ugu sareeya:
Martech Zone waxaa iska leh oo ku shaqeeya DK New Media, LLC, wakaaladda Douglas Karr. Haddii aad jeclaan lahayd warbixinno falanqeyn oo faahfaahsan, fadlan ila soo xiriir.
Qeybaha Xayeysiinta ee Hada
Qaybta muuqaalka leh - kani waa qaybta ugu muhiimsan ee si toos ah uga hooseysa bar-tilmaameedkayaga iyo ogeysiiska waxayna ku jirtaa dhammaan maqaallada iyo bogagga muhiimka ah ee goobta. Waxaa jira labada desktop iyo nooca mobile la heli karo.
Ma u Baahantahay Barnaamij Gaara?
Waxaan sidoo kale kuu abuuri karnaa barnaamijyo adiga kuu gaar ah oo ku saleysan aaladda, waddanka, nooca, iyo taariikhda baaxadeeda. Fadlan bixi faahfaahin qaar si aan tan kaagala tashanno Fadlan HA u isticmaalin foomkan macluumaad ku saabsan qoraalada la kafaala qaaday ama codsiyada backlink. Codsigaaga waa la tirtiri doonaa